Iketela Logesi LaseShayina Isitayela Se-XT-9S kanye Nefektri |I-AOLGA
Ukucaciswa: 220V-240V~, 50Hz/60Hz, 1200W;0.6L;0.75M ikhebula lamandla
Isici: 304 isinye insimbi engagqwali;Ugongolo lwesibambo luyi-switch kanye neladi;Thinta isibambo ukuze uvule/uvale;Isexwayiso se-Buzzer ngokukhethekile
Thinta isibambo ukuze uvule/uvale
• Beka iketela eligcwele amanzi esisekelweni, cindezela ngobumnene isibambo ukuze ubilise amanzi, ngaphandle kwesenzo esengeziwe esidingekayo.
• 600ML, umthamo omkhulu webhodlela lamanzi amaminerali ugwema ukungcola.
• Thinta isibambo, uthathe kuphela ama-180s ukuze amanzi abiliswe kahle ukuze isiphuzo sakho sijabulele.
• Iphansi legedlela elivalwe futhi linganomsindo liletha ukubila okuzolile kuyo yonke inqubo.
• Akukho ukuchichima
• Itholakalela ukubilisa amanzi netiye, futhi akukho ukuchichima ukugcina ideski lomile njalo.
• Isexwayiso sebhaza
• Uma ukubilisa sekuphelile, isexwayiso se-buzzer siqala ukuqinisekisa ukuphepha nolwazi oluhle kakhulu lomsebenzisi.
• Itholakala noma yikuphi ngephuzu lokubilisa elihlukile
• Iphuzu lokubilisa elihlukile kungakhathaliseki ukuthi lisezindaweni eziphakeme noma emathafeni linikeza ukuphila okude kanye nokusebenza okunokwenzeka endaweni ehlukahlukene.
I-V0 i-flameresistant impahla
• Izinto ezingezona ezensimbi ezisekelweni ezisezingeni lika-V0 ziphephile futhi azihambisani nemvelo.
Izinga lokushisa eliphezulu enamathela
• Eyokuqala ukuba nokushisa okuphezulu okungu-280℃ ngaphandle, okune-anticollision enhle nokumelana nokugqokwa kuletha ukuvikeleka okungcono nempilo ende.
• I-aluminium ehlanzekile yesibambo
• I-Millimeter-perfect concave yakhelwe ukuphatha kahle kakhulu.
• Izinto eziphindwe kabili ze-SUS304 zomzimba zivela ku-POSCO yaseNingizimu Korea.
Bamba okufanayo ngokushintsha
• Umklamo omuhle wokushintsha kalula ngokuhlolwa komsebenzi wezinsuku eziyi-100 oqhubekayo uphasisiwe.
• Isilawuli sezinga lokushisa sase-UK STRIX.
• Ihlala isikhathi eside futhi idume umhlaba wonke kulo mkhakha.
Isisekelo esinesisindo esikhethekile sengeziwe
• Okungeziwe okungu-200G kwengezwe ukuze kungahambi kahle.Awekho amanzi aqoqana endaweni ebushelelezi, kuyilapho ubufakazi bokuklwebha ngaphansi kwesingezansi.
Ibanga lokudla SUS304 insimbi engagqwali
Umzimba webhodwe elinezingqimba ezimbili, Phatha okufanayo ngokushintsha, isilawuli sezinga lokushisa sase-UK STRIX, isixwayiso se-Buzzer
Okwedlule: I-Anti-Scalding Electric Kettle LL-8860/8865 enezingqimba ezimbili
Olandelayo: Isomisi Sezinwele Esisheshayo RM-DF11
Igedlela Likagesi Elingawomisi
Igedlela likagesi Lokuvikela Elishisiwe
Igedlela likagesi lesitayela samaShayina
Igedlela likagesi 0.6 amalitha
Igedlela likagesi elinesethi yethreyi
Igedlela Likagesi Lekhwalithi Enhle
Igedlela likagesi lehhotela
Igedlela likagesi elincane lokuhamba
Igedlela Elincane Lamanzi Kagesi